Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / IFot Filler Faucets / WOWOW Wall Onyuswe Imbiza yokugcwalisa kwiNickel eBrashi
ikaliwe 5.00 Kwi-5 esekelwe kuyo 19 amanqaku umthengi
(19 ncomo ngumthengi)
Ngombulelo kuyilo lwayo lwe-ergonomic, udonga olufakwe embizeni yokucoca isitayile luyinto entle ukusebenzisa.
Isixhobo sayo sensimbi ephezulu enomgangatho ophezulu yenza ukuba ihlale ixesha elide kakhulu.
Le mveliso inika umpheki inkxaso ethembekileyo.
2311300 imiyalelo yokufaka
Isikhenkcisi esinebhotile ye-nickel pot filler faucet 2311300
Ngaba ujonge izinto ezithile ezikhethekileyo kuyilo lwakho lwekhitshi elitsha ukwenza ikhitshi lakho lisebenze kwaye likhululeke ngaxeshanye? Ke le faucet ye-nickel pot yokucoca inokuba yinto yakho. Ngaba ngamanye amaxesha usokola ukuthwala iimbiza ezinkulu zamanzi ukusuka ekhitshini lakho elisinki kwisitovu sakho? Obu bungeke bube bobangaphambili kunye neli phetshana lebhotile ye-nickel pot ye-WOWOW. Izitya zokutshiza zebhotile zihlala zifakwe emva kwesitovu sakho ekhitshini ukuze unxibelelwano lube kufutshane nendawo yakho yokupheka. Oku kuluncedo ngakumbi xa kufuneka ugcwalise iimbiza ezinkulu ngamanzi ukubilisa. Akunyanzelekanga ukuba uhambise iimbiza kwakhona ezinokuthoba isisindo seedisk ezininzi. Ngokukodwa xa ungafuni ukuzicinezela iingalo zakho okanye iingalo zakho, oku kunokuba sisisombululo esisebenzayo kakhulu sokuthuthuzela ekhitshini.
Enye into emnandi yecala lokuntywila ngembiza ye-nickel pot ye-WOWOW yinyani yokuba ungacoca isitovu sakho ekhitshini ngokulula, njengoko unxibelelwano namanzi kufutshane. Ukucoca kulula kakhulu ngephedi yokucoca ngombiza. Isikhenkcisi esinebhotile ye-nickel pot yokucoca ye-WOWOW ifakwe iialves ezimbini zeceramic ukwenzela ukuba kuqinisekiswe amava avuzayo. Ukuba enye yeavalvu ingahlala ivulekile, oku akuyi kubangela nayiphi na into evuzayo. Kuyacetyiswa ke ngoko ukuba ucime iialves zombini ukuze uqiniseke ukuba isitovu sakho ekhitshini sihlala somile ngamaxesha onke. Kungcono ukhuseleke kunokuxolisa!
Isikhenkcisi sombhluzi we-nickel pot we-faicket
Le faucet ye-nickel pot filler faucet yeWOWOW inombono wale mihla. Ngokuqinisekileyo inika uchukumiso olukhethekileyo, olunobuchule ekhitshini lakho ngaphandle kwexabiso lokwenza kulo. Njengombhali weefot filler faucets awaziwayo, abantu abaninzi banokubuza malunga noku xa bebona ikhitshi lakho. Iindawo ezincinci ezijolise kuzo ekhitshini zizitshitshisi. Oku kuthetha ukuba ingqalelo yabantu itsalela kwimizila yasekhitshini xa bejonga ekhitshini lakho. Le faucet yebhotile ye-nickel ye-nickel ifanela kanye nakulo naliphi na ikhitshi lasekhitshini, kwaye ngokuqinisekileyo iya kutsala umdla okhethekileyo.
I-faustet ye-Wowow ene-nickel pot yokucoca inokuba lula idityaniswe nezinye izixhobo zekhitshi zangoku ukwenza umanyano oluhambelana ekhompyutheni ekhayeni lakho. Imigca yesikwere yokudityaniswa nemilo ejikelezileyo yakwenza umdlalo odlalwayo. Abaqulunqi be-WOWOW bamkelwa kwilizwe jikelele njengokwenza ezona zoyilo zibukhali ezinokushicilelwa ngokulula kulo naliphi na iphephabhuku le-notch eliphambili malunga noyilo lwasekhitshini.
Fikelela kwi-faicket ye-filler ye-nickel pot
Ukusebenziseka kombiza okugcwalisa isitya kukuba ungayibeka eludongeni kufutshane nesitovu sakho. Ingagcinwa ngokulula eludongeni ngenxa yokudibana okubini. Ngale ndlela ayikhathazi indawo yakho yokupheka njengoko icoca indawo yokupheka. Kodwa uya kuba nokufikelela okubonakalayo phantse kwee-intshi ezingama-24 ukuze ugcwalise nayiphi na imbiza kuwo nawuphi na umgodi wesitovu. Isiciko sokucoca ngesimbiza sinokwandiswa ngokulula xa uyifuna ngokwenene, kwaye uyikhuphe ngokukhawuleza xa ugqibile. Xa uyifakileyo le faucet ye-nickel pot filler faucet, uya kuzisola ukuba khange uyifake le isixhobo ngaphambili.
Amanzi nawo ahamba ngokutyibilikayo ngumgangatho ophezulu we-Neoperl ABS aerator. Kukubonelela nge-anti-splatter kunye namava wamanzi angenawo avuzayo. Ukuzalisa izimbiza zakho kwisitovu sakho sokupheka ngamandla agcwele amanzi akuyi kubangela ukuphazamiseka. Ukusasaza amanzi kunokubangela iimeko ezinobungozi, ngakumbi xa upheka kwenye imilango yesitovu sakho ekhitshini. Isitovu sakho sisitya sihlala sigcina ngamaxesha onke, kwaye ungasisebenzisa xa imilango yomlilo ivulekile, ngaphandle kokubangela ingozi ekhitshini lakho.
Umgangatho isitofu sokuntywila sembiza ye-nickel
Iivalvu ezimbini zeli favel n potel filler faucet zenziwe ngezinto ezenziwe ngobumba, kwaye ziqinisekisa ukuguquka okutyibilikayo. Uyabona ukuba ii-valves azibangeli mva kwaye akukho kungqubana nokuba kwakanye. Ngenxa yoko uqinisekisiwe ukuba usebenza ngokutyibilikayo. Naxa unamajoyina acekethekileyo, le faucet ye-nickel pot egcweleyo inokusebenza ngokulula. Ngombulelo kuyilo lwayo lwe-ergonomic, udonga olufakwe kwisitya esingenazimbiza sikhulu kakhulu ukusebenzisa. Iingalo zombini zokujika ezijikelezayo ezingama-360 zibushelelekile ukusebenza nazo.
Isixhobo sentsimbi ephezulu enomgangatho ophezulu yenza ukuba le faucet ye-nickel pot filler ihlale ixesha elide. Umphezulu we-nickel ogcweleyo wale faucet yetephu yokucoca ulombini ungabinakho ukukrola kunye nokungonakalisi. Iziqhagamshelo zenziwe ngobhedu olomeleleyo, oluqinisekisa ukuhamba kwamanzi okunempilo ngaphandle kokutsala kuyo. Esona sisombululo sisiso soncedo lwempilo yakho kunye nosapho. Ngenxa yomgangatho, le nickel pot filler faucet isetyenziswa rhoqo kwiindawo zorhwebo nakwiindawo zokudlela nako.
Iwaranti ye-nickel pot filler faucet
Isikhenkcisi esinebhotile ye-nickel pot yokucoca iza ne-kit epheleleyo yokufaka. Ngesixhobo sokufaka unokufaka ngokulula isitovu se-nickel pot filler faucet ngokwakho ngaphandle kweengxaki. Oku kuya kukugcinela iindleko zexabiso elinamandla kakhulu. Ikhithi yokufaka iza nazo zonke izinto ezifunekayo ukuze unamathele kwisikhuphe setephu sombhalo ogqitywe eludongeni. Ukubandakanya i-wlen ye-Allen, i-Teflon tape, kunye neigloves zokufaka ukuze zonakalise izandla zakho kwaye uzigcine zicocekile kwinkqubo yokufaka. Siyaqinisekisa ke ngoko ukuba ungayifaka le ncindi yokubhabha ye-nickel pot kunye nesiqingatha seyure. Ewe kunjalo, kuphela kwimeko yokuba inqaku lamanzi kwindawo efanelekileyo.
Njengoko i-WOWOW ikukuqiniseka ngomgangatho wephegi yokuphelisa yokuntywilisela ye-nickel pot, ikunika ixesha lesiqinisekiso seminyaka emihlanu. Njengoko i-WOWOW ibonelela ngexabiso elifanelekileyo lemali onokuyifumana, ikwanikeza nesiqinisekiso sokubuyiswa kwemali kwiintsuku ezingama-5. Ke ngoko awukho mngcipheko kwaphela. Ukuba awungekhe uqiniseke ngale nto ifunxwayo ye-nickel pot filler faucet, umane ufumana imbuyekezo epheleleyo. I-Wowow imele imveliso yayo kwaye unokuqaphela kwangoko. Izibonelelo zesitofu sokutshiza esinebhotile ye-nickel kwi-kappele:
• Uyilo lwanamhlanje lwebhotile yokucoca
Ukudityaniswa komgangatho kunye neevalve ezisemgangathweni
Kukhuseleke kakhulu ukuyisebenzisa
Ukugqitywa kwe-nickel egqityiweyo
• Kulula ukuyifaka kwimizuzu engama-30
I-SKU: 2311300 iindidi: IFaucets yasekhitshini, IFot Filler Faucets tags: Uqhekeze uNickel, Imbiza yePot, Umtshati oMtshatileyo
Le mpompo yokugcwalisa imbiza kwakulula kumyeni wam ukuyifaka, kuyithatha malunga nemizuzu eli-10 ukuyenza. Ukuhamba kuhamba kakuhle kwaye kulula, akukho micimbi yokuyisebenzisa kude kube ngoku. Yomelele kakhulu kwaye ukuhamba kuphelele, kukwavuza ngokukhululekileyo, ukugqitywa kwe-nickel e-brushed kuyinto entle kwaye ihambelana ngokugqibeleleyo nekhitshi lam lonke.
Ndichithe iintsuku ezimbalwa ndikhangela iteyiphu yokugcwalisa ibhotile ye-nickel enemigca ecocekileyo, yanamhlanje eyayikuhlahlo-lwabiwo mali. Ndifumene le nto yokugcwalisa imbiza kwiWOWOW kwaye andinokonwaba ngakumbi. Le tephu ilunge kakhulu, ibingumoya ukuyifaka, isebenza kakuhle, kwaye ijongeka intle ekhitshini lethu. Ngaba soze ndihlawule amaxabiso ebhanti aphezulu kwakhona. Ndincoma kakhulu!
Emva kwamava amabi ngemveliso eyahlukileyo evuza, sagqiba kwelokuba sizame le faucet yombhobho. Kungumsebenzi onzima kwaye usebenza kakuhle ukuza kuthi ga ngoku, awuvuza, kulula kakhulu ukuwufaka. Ihambelana nazo zonke izixhobo zethu zasekhitshini, thanda ukubonwa kokugqitywa kwe-nickel, ubunjani beengono eziqinileyo zilungile, sonwabe kakhulu ukuba siyithengile le mveliso.
Ndigcine intywenka yoku-odola oku kunokuba uyithenge kwivenkile enye ephantse iphindwe kathathu kakhulu. Kulula kakhulu ukuyifaka kwaye ijongeka intle!
Sivuselela / siphucula ikhaya lethu lonke malunga ne-1984 kuhlahlo-lwabiwo mali lokuhlawula njengoko usenza. Umyeni wam ungumpheki kwaye ikhitshi yenye yeeprojekthi zokuqala ezinkulu zokujongana nazo. Sigqibe kwelokuba into yokugcwalisa imbiza eyoyikekayo ngaphezulu kwesitovu iya kuba yindlela efanelekileyo yokongeza inzala kunye nexabiso ekhitshini lethu. Wonke umntu oyibonayo ucinga ukuba yahlukile kwaye inobukrelekrele. Xa umama etyelele kwaye efuna ukupheka imbiza enkulu yesuphu akasadingi kuphatha imbiza enzima yamanzi ukusuka kwisinki ukuya esitovini. Le mveliso izalisekisa iimfuno zethu ezibonakalayo kwaye ilungelelene nobuhle bendlu yethu obuvela ngokugqibeleleyo.
Siyamthanda umenzi wembiza, kwaye khange sibe nangxaki ngokuvuza okanye nantoni na. Ijongeka intle kwaye isebenza ngokugqibeleleyo.
Siye saphinda sanyanzeliswa ukuba silandele iNkanyamba uHarvey kwaye le yayiyinto "endiyiphuculeyo" endiyikhethile- ndiyibeke kwigaraji yam yezixhobo ukuze ndikwazi ukugcwalisa i-keurig yam ngaphandle kokuyihambisa. Bekulungile ukuza kuthi ga ngoku, ndonwabile kakhulu!
Indlu yam ibinento engaqhelekanga, indala, eyekiweyo yokugcwalisa imbiza ebintle kodwa ivuza. Ndizamile amanyathelo ambalwa okutshintsha, kodwa olona hlobo luqhelekileyo lwevalvu alulungelanga. Bendikwiimarike ngento encinci kodwa entle endaweni yayo, ngaphezulu ukucofa umngxunya eludongeni kunokusebenzisa kakhulu. Oku kuyahambelana nalo mthetho uyilwayo kakuhle, kwaye usebenza ngokwaneleyo ukuba ndiqinisekile ukuwusebenzisa ukuzalisa iimbiza ezinzima.
-Ingabizi. Le nto yokugcwalisa imbiza ixabise ngaphantsi kwe-1/4 yenguqulelo entsha yombiza wam wamandulo.
-Intle. Ukugqitywa kweoyile yebronze yebrashi (-style) kugqibelele.
Iyasebenza. Ndiyisebenzisile ukugcwalisa imbiza ezilishumi elinambini.
-Kugqityiwe. Izivalo ezimbini, ingalo ejijekayo, kunye nesikhuseli-moya.
-Iza kunye nevalve eyongezelelweyo yodongwe xa kunokwenzeka ukuba ufune ukutshintshwa.
-Short. Ingalo imfutshane, kodwa ayisiyiyo ngqo intlungu yokutyhala imbiza okomzuzwana kufutshane netepu kunokuba uyise esinkini, ke le ayisiyongxaki kubantu abaninzi nokuba imfutshane kwi-oveni yakho.
-Izahlulo ukuba uvula ivelufa yodonga kuqala. Andazi ukuba yile modeli okanye kungenxa yokuba itephu yam endala yayonakalisiwe, kodwa uxinzelelo kule modeli luphezulu WAY. Ukuba ndivula udonga kuqala kwaye emva koko impompo, iyatshica njengentloko yeshawari. Ukuba ndivula itephu kuqala eludongeni, ndifumana umlambo othe ngqo njengoko kulindelwe. Esi sisiqu esincinci, kufuneka ndilumke nje xa iindwendwe ziphelile.
-Alukho isibiyeli esinyukayo. Itompu yam yakudala yayinesibiyeli ukuqinisekisa ukuba ingalo inyuswe ngokuchanekileyo. Le ayenzi njalo, kwaye ixhomekeke kufakelo oluchanekileyo oluza kubanjwa ngokufanelekileyo endaweni. Andizukucela umngeni kwimibhobho yam engaqhelekanga ngokuzama ukugcwalisa imbiza ejikeleze elinye ithuba, ke ayisebenzi edongeni. Ndikrokrela ukuba iyakulunga ukuba ndiyikhuphile, kodwa andinakuqiniseka ukuba ufakelo oludala lwaluchanekile ngokuchanekileyo, ke ndiza kuyigcina apho ikhoyo ngoku. Logama kungekho mntu i-yanks engalweni, ihleli ngokugqibeleleyo eludongeni. Njengoko benditshilo, bendikhathalela inkangeleko kwaye ndisebenzisa i-filler yam ngamanye amaxesha, yiyo loo nto i-100% intle nam.
Ukugqibelela! Ixabiso elihle kakhulu kwixabiso. Inzima njengamagama amaxabiso aphezulu.
Sithengise i-1/2 ″ isiphelo sendoda emanzini kwaye sajija eli lungelo kunxibelelwano (i-1/2 ″ ngaphaya kwe-sheetrock kunye ne-tile) endaweni yokusebenzisa ubhedu oluyindoda oluze nalo. Senze olunye uhlengahlengiso kwaye sifakele ibhodi ye-1/2 ye-mdf ejikeleze umgca wamanzi ukuze sikwazi ukujija ngokuthe ngqo kwinto eqinileyo. La manyathelo mabini abonakala ngathi aqinisekisa ukufakwa.
Iipavali ezimbini ziye zaqinisekisa ukuba akukho drip. Ijongeka intle. Iingalo zihamba ngesixa esifanelekileyo sokuchasana. Siyavuya ngomsebenzi. Sivuyiswe nangakumbi kukonga ngaphezulu kwexabiso elinamaxabiso aphezulu abonakala ngathi ayimigangatho efanayo.
Inye into endinokuyenza eyahlukileyo kwixa elizayo: ndiyifaka malunga ne-4 ″ ngaphantsi kunale ndiyenzileyo. Ku 16 ″ ngaphezulu kwesitovu amanzi anendlela ende yokuwela embizeni. I-Id mhlawumbi uyifake kufutshane ne-12 ″ ukuba bendiza kuyenza kwakhona.
Ndithenge ezininzi (ezine ukuba zichaneke) ezinye iinguqulelo ezibonakala ngathi ziyafana nemali encinci kakhulu. Ndimoshe iinyanga ezimbini ndayalela entsha, ukuba ifakiwe, kuphela ukuba ivuze kwiindawo ezininzi, ndiyibuyise, ndilinde ukubuyiselwa imali, kwaye ndi-odole enye. Emva kokubuyisa i-filler emva kokugcwalisa ndandikhathazekile. Ndithathe isigqibo sokuba kufuneka ndiyifunxe kwaye ndichithe kancinci ukufumana imveliso engcono enethemba lokuba ayizukuvuza. Ukufika kwayo, umgangatho wemveliso wawungcono kakhulu kunokubiza okungama- $ 70 endandi-odole. Ufakelo luhambe ngcono kunokuba bekulindelwe! Amalungu ongezelelweyo afakiwe, kunye nendlela yokunxibelelana nenkonzo yabathengi ngemicimbi kunokuba uyibuyise, kunye nemikhombandlela ngesiNgesi esifanelekileyo! Ukusukela oko sifakileyo sinendawo ezivuzayo okanye ezinye izinto. Ndandiba sisilumko kunye needola. Le kuphela kwembiza yokugcwalisa (ezintlanu endikhe ndajongana nayo) ebifanele ukujonga. wowow kufanele ukuba ujonge kumakhulu ekunkqonkqoza olu hlobo ngesiqingatha seendleko kwaye uzivale.
Imveliso eyoyikekayo. Iqinile kwaye ilunge kakhulu. Sineembiza ezinkulu ukuya kuthi ga kwi-30qts kwaye le yimpendulo yokugcwalisa. Uya kudinga ukwazi ezinye izakhono zokufaka imibhobho yokufaka umbhobho ukuze uzifakele kodwa kufanelekile. Esi sinye sesihlanu seendleko njengakwivenkile yevenkile (igolide eyenziwe ngomatshini). Siyayithanda. Akusekho mfuneko yokugcwalisa imiphanda! Ulwakhiwo oluqinileyo kwaye luze luze nevalve yokugcina
Xa kuthelekiswa nezixhobo zam ezingenanto zeminwe ezingenanto, umbala wale nto ushushu kwaye igolide ngakumbi kwaye izixhobo ezitsha zipholile ngakumbi ngesilivere eluhlaza okwesibhakabhaka. Isakhangeleka intle ngezixhobo zam kunye nokuthelekisa… iyahambelana negama lebrendi elinebrashi elungiselelwe izinto ezifana neefompu kunye neentloko zeeshawari endinazo kwamanye amagumbi (Ukuba uzama ukufumana isilinganisi ngombala wesilivere).
Umsebenzi lelona candelo lililo. Umgodi wawufakwe phezulu ngaphezu koluhlu lwam ukuvumela iimbiza ezide kodwa nokuba amanzi azele kukuzalisa ezona mbiza zincinci, amanzi awaphali aphume ezimbizeni kwaphela.
Iyajikeleza kwaye ihamba ngokulula ngokuthinta nje okuncinci kwesandla kwaye inamacala amabini.
Uxinzelelo oluphezulu kakhulu lwamanzi, akukho kuvuza, ivelufa yongezelelweyo kwiimfuno ezizayo. Ngokubanzi wanelisekile kwaye ngekhe atshintshe
Oku kwakulula ukuba umyeni wam ayifake kwaye ahambelane nazo zonke izixhobo zam zasekhitshini. Andinayo imiba ngokusetyenziswa kunye nentshukumo egudileyo kwaye kulula. Oku kuqinile kwaye ukuhamba kugqibelele. Ndonwabile kakhulu ngumgangatho kwaye ndonwabile ngexabiso endilihlawuleleyo. Ndingayithenga kwakhona le nto ukuba sikhona isidingo sokuzibonakalisa.
Umntu othanda iimbiza kodwa ngelishwa uyavuza nasemva kokuba ikhontraktha yethu izamile ukuyilungisa. Ngelishwa, khange ayifake kwangoko kwaye ngoku andinakuyibuyisa. Ukuthanda ngokwenyani ukubonakala kwale potfiller kunye neendleko zayo.
Siyayithanda! Ngaba umntu owufake ngemibhobho yamanzi wayifaka kwaye isebenze njengekhubalo. Umama osele ekhulile uyisebenzisa xa esenza ukunkonkxa okanye ukubilisa ipasta kunye neetapile. Unesifo samathambo kwaye akanakho ukuphatha imbiza epheleleyo esinkini.
Ukugcwaliswa kwembiza kukumgangatho obalaseleyo kwaye inkxaso yokuthenga iposti evela kwinkonzo yabathengi ayiqhelekanga !! Andinokonwaba ngakumbi ukuba ndiyithengile le mveliso! Ngokuqinisekileyo baya kuthenga iimveliso zabo kwakhona kwaye ndicebise kubo bonke endibaziyo !!
Yithanda imbiza. Ndisebenzisa ispigot ecaleni kodonga lwangasemva. Kulula kakhulu ukulawula umthamo wamanzi embizeni. Ukuphuma ngaphandle kwembiza kwaye ubuyele eludongeni ngaphandle komzamo omncinci
Asikaze sibe nokugcwalisa imbiza ngaphambili mhlawumbi yeyona nto intsha kodwa le nto yokugcwalisa imbiza yenziwe kakuhle kwaye inesitayile. Yongezwa ngokugqibeleleyo kwikhitshi lethu elitsha.